QORMADII OGAALKAAGA KU DARSO :MA OGTAHAY AKHRISTAW | Toggaherer's Weblog
QAAB DHISMEEDKA ISBAHAYSIGA XISBUL ISLAAM SE INDHACADE MA KU QANACSAN YAHAY QAABKAN WAX LOO DHISAY
QORMADII OGAALKAGA KU DARSO: MA OGTAHAY AKHRISTAW
QORMADII KORDHSO AQOONTAADA: MA OGTAHAY AKHRISTAW
Ma ogtahay akhristow in 7da dhisme ee loogu magac daray 7dii cajiibka badneyd ay shan ka mid ahi ku yaalaan dalal Islaam ah. Mase ogtahay in ay hadda yihiin kuwa taariikhdu xusto oo keliya, waxa ayna kala yihiin:
1- Ahraamta Kheops oo ku taala Gizeh (Masar) waxaa la dhisay 2590-2470 ka hor Dh.N.C, waana kan keliya ee ilaa iyo hadda taagan.
2- Taalada Zeus oo ku taalay Olimbia (Griig) waxaa la dhisay toddoba qarni ka hor Dh.N.C, waxaana baabi’iyey dab qabsaday sannadii 462.
3- Macbadka Artemis oo ku yaaley Efeso (Turkiya) waxaa la dhisay 6 qarni ka hor Dh.N.C, wuxuuna gebi ahaan burburay horaantii qarnigii 4aad.
4- Dhismihii weynaa ee Halikarnase oo ku yaaley Halikarnese (Turkiya) waxaa la dhisay abbaarihii 325 ka hor Dh.N.C. gebi ahaana wuu burburay.
5- Beeraha raaraca ee Babilooniya (Ciraaq) 604 – 562 ka hor Dh.N.C, lama garanayo waqtigii iyo sababihii burburkoodii.
6- Garoonkii taaladii Rhodi oo yaaley Rhodi (Griig), 292 – 282 ka hor Dh.N.C, waxa ay burburtay abbaarihii 224 ka hor Dh.N.C.
7- Musawacii Aleksandariya wuxuuna ku yaalay magaalada Aleksandariya (Masar), 270 ka hor Dh.N.C, waxaa burburiyey baa qa qiyaasayaa dhul-gariir.
Dhismooyinkaas waxa ay cajiib ku ahaayeen sida loo dhisay iyadoo waqtigaas aysan jirin farsamo iyo qalab casri ah oo u siira gelin karay dadkii wagaa joogay.
F.G. Taariikhdii ka hor dhalashadii Nabi Ciise NKHA. (Dh.N.C) waxaa loo kala hor mariyaa sida ay u kala weyn tahay, ee maaha sida tan maanta oo ah sida ay u kala yartahay.
Ma ogtahay akhristow in 20 sano laga joogo markii ugu horeysay ee kombutedara cudurka ku dhaca ee loo yaqaan virus la adeegsaday, kaasoo ahaa markaa mid leysugu gudbiyo oo keliya cajaladaha loo yaqaan floppy disc. Dadka kombuterada waxyeeleeya ee lagu magacaabo Hackers ayaa waxa ay maalmahan u dabaaldegeyaan 20 guuradaa oo uu markii ugu horeysay soo saaray nin sameeya barnaamijyada kombuterada oo dhalashadiisu ahayd dalka Bakistaan virus-kaas oo uu ugu magac daray Brain (maskax). _______________________________________________________________
Ma ogtahay in dalka Iran ay ka dhacday qiso dad badan soo jiidatay dhegah-ooda, qisadaasoo ah in ay haweeney ninkeedii furay ay maxkamad uga guuleysatay in uu biiliyo ilaa iyo sannadku marka uu yahay 12,338ka.
Waxa ay taasina ku dhacday in markii uu ninku guursanayey naagtan uu meherkeeda u ballan qaaday in uu siiyo 124.000 oo ah lacag dahab ah, balse uusan siin ninkan oo qirtay eeda hase yeeshee sheegay in uusan intaa heli karin ayaa waxa uu garsooruhu ku xukumay in uu tartiib-tartiib u siiyo oo uu bishiiba mid uu bixiyo. Ninkaas ayaa deyntu ka dhamaan doontaa 10.333 sano ka dib.
Dalka talyaaniga ayaa waxaa ku soo badanaya marba marka ka dambeysa barashada afka carabiga iyo diinta islaamkaba. Jaamacado dhowr ah ayaa waxa ay bilaabeen koorosyo ku aadan barashada afka carabiga iyadoo isqoristuba ay sannadba sannadka ka dambeeya ay sii kordheyso. Jaamacadda ugu weyn ee lagu barto afka carabiga eek u taala magaalada Napoli ayaa hormuudkeedu waxa uu sheegay in sannad akademiyeedka 2008/2009 uu kordhay boqolkiiba laba boqol iyo konton 250%. Waxaa jira ayuu leeyahay hormuudku in tiradu ay sii badaneyso marka laga soo bilaabo wixii ka 11kii setember ee sannadii 2001. Dadka u kuur gala ayaa waxa ay leeyihiin maaha oo keliya talyaaniga ee xitaa dalka mareykanka ayaa wixii ka dambeeyey weeraradii september 11keedii uu badanayo dadka jecel in ay wax ka ogaadaan diinta islaamka iyo dalalka haysta diintaasba. Waxaa kaloo ay leeyihiin waxaa sababay in ay dhallinyaradu ay ku hamiyaan in ay shaqo ku xidhaan afafka qaar sida afka carabiga, ruushka, shiinaha iwm .
Buurta labaad ee ugu dheer dunida ayaa ah K2 oo ku taala qaaradda Asiya (Pakistan), dhererkeeduna uu ka sareeyo 8611 mitir dusha badda, iyadoo ay ka dheer tahay oo keliya Everest laakiinse K2 ayaa ah tan ay dadka buuraha fuula ku tilmaameen tan ugu dhib badan (fuulitaankeeda) iyadoona ay u bixiyeen buurta buuraha. K2 ayaa waxa ay u sameysan tahay sida Piramid ka oo kale ama leh madax fiiqan iyo sal ballaadhan. Waxaana markii ugu horeysay lagu guuleystay in cidhifkeeda la gaadHo sannadii 1954kii.
Waxa soo diyaariyay: Mubarik Yusuf Muuse